Kuisa log: Archlinux | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Kugoverwa, GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Iyi dzidziso yakadzikiswa mushure Arch Linux ichachinja maitiro ayo ekumisikidza muna Chikunguru 2012. Parizvino, uye kusvikira taita yedu yakagadziridzwa dzidziso, tinokurudzira kubvunza dzidziso iyi yakagadzirirwa neshamwari yedu blog Gespadas.
Pashure KZKG ^ Gaara ichagadzira ndangariro kwandiri Inotakura USB with the yekupedzisira .iso yakanyorwa nevagadziri ve ArchLinux, Ndakatanga kuisa kugovera uku paPC yangu.
1 Kuisa maitiro.
1.1 Chii chatinofanira kuziva kana tichipatsanura?
2 Kunotevera kuendesa.
Maitiro ekumisikidza andinotsanangudza pazasi akaitwa gare gare mumuchina chaiwo, chimwe chinhu chandinokurudzira kuti iwe uite kana ino inguva yekutanga yaunoisa ArchLinux. Chero kukanganisa kunokumbira undizivise kuti ndigadzirise.
Chidzitiro chekutanga chatichaona ndeichi:
Sezvazviri zvine musoro, tinosarudza sarudzo inoratidzwa mumufananidzo: Bhutsu Arch Linux (i686). Mushure mekutanga, kana zvese zvikafamba mushe, tinowana ichi skrini:
Sezvo iwe uchigona kunyatsoverenga, kutanga iyo yekumisikidza maitiro isu tinofanirwa kuita iwo wekuraira:
Asi kutanga, zvinokurudzirwa kugadzirisa yedu keyboard, saka tinonyora:
Nemurairo uyu ArchLinux inotibvumidza isu kusarudza iyo keyboard dhizaini yatinozoshandisa. Mune yangu nyaya, ndine keyboard yeChirungu, saka ndakasarudza inotevera sarudzo:
Gare gare tinowana inotevera skrini:
Iko kunotikumbira isu kusarudza font yeconsole. Ndinoisiya nekukasira .. Uye zvino kana isu tikaisa rairo yekutanga kuisirwa:
Patinopa pinda isu tichawana iyi yakanaka menyu (izvo zvinotikoka kuti tizvinyadzise isu hahahaha)..
Izvo hazvitaure kuti iyo menyu inoteera zvine musoro kurongeka, saka hazvikurudzirwe kusvetuka chero nhanho, kunyangwe zvichiratidzika kwandiri kunge isipo yacho pachayo haibvumire iwe. Iyi yekutanga sarudzo ichatibvumidza isu kusarudza kubva kwatinozoisa ekutanga mapakeji uye kana uchipa pinda chidzitiro ichi hachiwoneki.
Isu tinoisiya nekukasira mune yekutanga sarudzo, kuti iise mapakeji anodiwa kubva ku CD-ROM, kana mune iyi nyaya kubva mundangariro. Kana tangopa Ok tinodzokera kumenu mumufananidzo 5. Isu tinobva tasvetukira padanho rechipiri, kwatinosarudza chinyorwa chemavara chatinoda kushandisa:
Ini handizive nezvako, asi zvirinani kwandiri VI Ndezve vashandisi vane octopus yakaoma, saka ini ndinoshandisa Nano LOL. Kana tangopa Ok tinodzokera kumenu mumufananidzo 5. Isu tinoenda padanho rechitatu kwatino gadziridza iyo wachi wachi:
Mune yangu nyaya ini sarudza America »Havana.
Ipapo isu tinogadzira iyo wachi pamwe nesarudzo Seta nguva uye zuva. Ini ndinoshandisa sarudzo: nguva yemuno.
Uye ini ndinosarudza iyo sarudzo manyuwari:
Patinopedza newachi kunouya chinonyanya kukosha chikamu chekumisikidza: Disk kupatsanura. Kuenzanisira uyu muenzaniso ini ndakange ndagadzira matatu zvikamu:
sdaxnumx : Nezve mudzi [/].
sdaxnumx : Kumba [/ kumba].
sdaxnumx : Kuchinjanisa [chinjana]
ArchLinux Nekukanganisa kana iwe ukashandisa isina chinhu dhisiki, ichagadzira zvina zvikamu. Chekutanga pane zvese chichava mu Ext2 uye yakapihwa / boot. Mune yangu chaiyo kesi handiparadzanise iyo / boot. Kuti tidzivise nhanho iyi isu tichaona gare gare mufananidzo unotsanangura maitiro aya.
Chii chatinofanira kuziva kana tichipatsanura?
Kana tangopinda sarudzo yekuparadzanisa nevamwe, tichaona chinyorwa ichi:
Isu tine zvingasarudzwa zvina:
Auto-Gadzirira : Icho chikamu chinotungamirwa. Kushandiswa kwaro kwakanaka kana isu tisina chinhu dhisiki kana isu tine hanya zvishoma nezve kurasikirwa neiyo data, asi haisi iyo yatiri kuzoshandisa.
Nemaoko Chikamu Chikamu Chakaomarara : Pano isu tinongofanirwa kupinda kana tichida kugadzira zvikamu zvitsva kana kuzvidzima pane rakaomarara diski, hatifarire izvozvi.
Nemaoko Rongedza zvigadzirwa zvemablock, masystems uye makomo emakomo : Iyi ndiyo sarudzo inotinakidza nekuti ichatibvumidza kusarudza mune izvo zvikamu zvatinozokwira mudzi, imba nekuchinjanisa.
Rollback yekupedzisira faira system shanduko : Iyi sarudzo ndeyekudzokera kune yekutanga mamiriro e diski. Kana ini handifunge kuti tinochida.
Zvakanaka, tinosarudza sarudzo # 3 uye isu tinofanirwa kuwana chimwe chinhu seichi:
Mune yangu chaiyo kesi, ine hard drive, ini ndinosarudza yekutanga sarudzo nekutadza. Kusarudza dzimwe sarudzo dzandisingazive kana zvichizobvumirwa, saka usazvibata kunze kwekunge uri mumuchina chaiwo. Tinopa pinda uye isu tinowana inotevera skrini:
Pano tinogona kuona zvikamu zvitatu zvandakakuudza nezvazvo pakutanga. Usatarise kukura kwavo. Ivo vanongoda kuziva izvo sda1 ndeye mudzi, sda2 yekumba y sda5 yekuchinjanisa. Isu tinosarudza yekutanga uye tinopa pinda. Isu tinowana inotevera skrini:
Attention neiyi meseji. Apa zvaari kutibvunza ndezvekuti isu tinosarudza kana tichida yakachena, fomati kana chero chaunoda kudaidza iyo chikamu chiri mubvunzo. Nekuti sda1 hapana dambudziko, asi isu tinofanirwa kungwarira kana tichida kuchengeta data redu muchikamu cheiyo / kumba.
Mune ino kesi isu tinokuudza iwe izvo Hungu <Hungu> uye isu tinowana rinotevera hwindo:
Tinosarudza Ext4 nemiseve ye Up / pasi uye tinopa pinda. Ipapo chidzitiro patinosarudza izvo zvatinoda kukwira pachikamu icho hachioneke:
Kwedu isu tinosarudza / mudzi. Tinopa pinda uye isu tinoenda kunotevera skrini:
Pano tinogona kuisa Chitaera kana Chinyorwa ku diski. Iyi nhanho ndeyokusarudza, saka ndinoisiya seyazviri nekutadza. Tinopa pinda uye isu tinoenda kunotevera skrini:
Zvakafanana nedanho rapfuura, rinosiiwa nekutadza kunze kwekunge isu taziva nzira yekupfuura yakatarwa parameter ku mkfs.ext4.
Tinodzokorora nhanho imwechete ku sdaxnumx, tichigara tichirangarira kuti isu hatifanire kupa Hungu kusarudzo yemufananidzo #16 kana tichida kuchengeta yedu / kumba. Kana iri sdaxnumx chinhu chega chinoshanduka nesda1 ndechekuti panzvimbo yekusarudza Ext4, isu tinosarudza yekutanga sarudzo mumufananidzo #17, kana Kuchinjana.
Kana isu tichiita zvese nenzira kwayo, zvikamu zvacho zvinofanirwa kutaridzika seizvi:
Tinosarudza WAITWA, tinopa pinda uye tinowana inotevera meseji:
Izvi zvinotitaurira ndezvekuti isu hatina kugadzira chakaparadzaniswa cheiyo / boot. Nokusingaperi inotikumbira kuti tidzokere kugadzirisa izvi nesarudzo: shure, asi isu tinosarudza sarudzo: ignore. Kana tangopa Ok tinodzokera kumenu mumufananidzo 5 uye enda kusarudzo 5: Sarudza Mapakeji.
Iyi sarudzo pakati pezvimwe zvinhu inotibvumidza kuisa iyo grub:
Uye kana tapedza tinoenda kune inotevera menyu sarudzo: Isa Mapakeji.
Nokusingaperi, chete yekutanga sarudzo inosarudzwa. Ini ndinomaka zvese kuisa mamwe maficha ayo gare gare andingangoda kuanyora zvichingodaro. Kana isu tikamaka yechipiri, inotevera skrini ichaonekwa:
Kwatinofanira kumaka (ine bhaa renzvimbo) mapakeji api atinoda kuisa. Kana tapedza tinodzvanya OK uye sisitimu inotanga kuisa:
Kana zvapera, tinopa pinda uye tinowana izvi:
Kana tichida isu tinogona kutsika danho iri, sekureba sekuziva kwedu gare gare kuti isu tinofanirwa kuchinjisa kuitira kuti Arch shanda sezvazvinofanira kuita. Ndeapi mafaira andinogadzirisa?
/etc/rc.conf : Faira rakakomba kubvira madhimoni anotanga nehurongwa, netiweki, ma module uye nezvimwe sarudzo zvakagadziriswa mairi.
/etc/resolv.conf : Kuisa kutarisa DNS kune network.
/etc/pacman.conf : Kwandinongo gadzirisa sarudzo yekushandisa proxy muPacman.
/etc/pacman.d/mirrorlist : Iko Arch zvinyorwa zvinowedzerwa kana kubviswa.
Mudzi-Pasiwedhi : Kana ini ndikakurudzira kuti iwe usarudze iyi sarudzo yekupa Mudzi password yekuchengetedza, zvikasadaro haibvunze password yemushandisi uyu.
Tichaona zvese izvi sarudzo muchikamu chechipiri chechinyorwa chino. Patinopa pinda en Done Mupepeti anofanirwa kubuda nekumisikidzwa kweiyo Grub. Ini nekutadza ndinoivhara ne Ctrl + X kusachinja chero chinhu mufaira iri uye tinowana iri hwindo:
Tinopa pinda kuti iiswe Grub mu / dev / sda uye kana yapedza tinogona kutangidza PC nemirairo:
Muchikamu chinotevera tichaona maitiro ekugadzirisa mafaira:
Tichaonawo maitiro ekugadzira mushandisi wedu uye nekuiisa mumapoka anodikanwa, kuwedzera kune kuiswa kwe Xfce.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Kuisa log: Archlinux
yakanakisa post elav inokosheswa kwazvo.
Iyo nhanho yekuwedzera opts ye mkfs.ext4 isu tinokwanisa kuwedzera dzimwe dzinonakidza sarudzo senge nguva yemasikati nodiratetime mune arch wiki pane ruzivo rwakanaka kwazvo nezve izvi.
Ichokwadi, asi ini handina munhu wese kuziva kuti inguvai yemasikati ndeye hahaha. Saka iwe zvirinani uzvidzidze kunze uko nekuverenga 😛
hehe ini ndakanganwa kuwedzera iyo url https://wiki.archlinux.org/index.php/Fstab_(Espa%C3%B1ol)
Kusvikira ini ndakurudzirwa kutaura xD ... asi vakarova chord ...
Ndakagara ndiri mumwe wevaya vano pfuura nemuma distros ese anowanikwa, asi Arch inyaya yakasarudzika munhoroondo yangu, ini ndichiri kuda kuyedza gentoo uye ini ndichiri kuyedza nguva zhinji x distro, asi iyo yakagara Yakarebesa pakombuta yangu uye nezvimwe ndainakirwa neArch, zvese desktop uye laptop ...
Ndakatadziswa zvishoma: P, asi zvakadaro ndaida kukuudza zvinhu zviviri:
1) Ini pachangu ndinofarira kusvetuka grub, uye pakupera kwekumisikidza, ndisati ndatanga patsva, ita pacman -S grub2 && kugadzirisa-grub 😉
Ini ndinozvisarudzira nenzira iyi kudzivirira matambudziko kana uchivandudza grub yekuita zvinhu senge kuisa burg.
2) Kurudziro ... mumaonero angu ekuzvininipisa uye ndichifunga kuti iniwo ndakatama kubva kuDebian ... chenjera kuti usanyanye kufara nezve zvakawanda zvakajairika mupasuru (hongu pandakazviita zvaive zviripo panguva ye kde4.something), pacman iri Addictive kunyanya kana iwe ukawedzera iyo AUR kwairi, uye iwe ungazopedzisira uine "yakanyanya kufutirwa" distro yemapasuru iwe yausingazomboshandisa kupfuura kwekutanga kuyedza.
hehehehe ndinofunga ndakawedzera zvinopfuura zvakafanira asi zvakanaka kune vamwe vese maita basa kwazvo nekutumira uye makorokoto: D.
Pindura kuna Guso
Ndatenda kwazvo neiyo Grub tip, dai KZKG ^ Gaara anga achizviziva iyo system isati yatakura kamwechete hahaha. Nehurombo kwatiri isu hatigone kunakidzwa neruzivo rwakazara, nekuti hatina yakazara internet kuwana uye nekudaro hatigone kushandisa AUR.
Yakanaka chinyorwa, ini ndanga ndichifunga kuisa Arch (ayo mareti anondinakidza) uye pandinoburitsa chinyorwa chinotevera ndichagadzira iyo 🙂
Icho chaicho chakanakisa posvo, ini handina kuyedza arch parizvino, asi ini ndichaedza gare gare.
Ndatenda gwara rakanaka kwazvo, kana ndikakwanisa kuisa ndinokuudza kuti zvakafamba sei.
Iso rekupedzisira handizive kuti nei chimwe chinhu chandatadza chakandipa matambudziko ne pacman neinternet.
Ndiri kuzo chengeta iyo posvo yedambudziko chairo risingaitike kwandiri nealbum yandinayo kubva gore rapfuura
Nenzira, resolutionv.conf? Ini ndinofunga iro faira haridi kubatwa
Ushingi, rangarira kuti isu tinoshandisa static IPs uye tinobuda nepaseva kubasa kwedu. Saka isu tinofanirwa kuzvizivisa isu kuti data, DNS server uye zvichingodaro.
Ehe, ipapo iwe unotsanangura dura reLAN yako (kubva linux.net semuenzaniso) uye maseva eDNS aunofanira kushandisa.
Zvakanakisa, zvakandiyeuchidza zvakawanda zvekuisa Vector Linux, ini ndichaenda kuyedza.
Ini ndakatevera yekumisikidza nhanho nhanho uye haishande kwandiri, iyo grub haina kuisa, hapana yekukanganisa meseji, haina chete kuisa.
2 mifananidzo yakadzorwa, md5 yakaongororwa uye hapana, 3 kuyedza nemufananidzo wega wega.
Zvese zviri muvirtualbox.
Iwe unoiudza iyo kuisa Grub pa / dev / sda uye haIYE kuiisa?
Iyo haiise, uye haina kupa mhosho meseji, haina kungoisa.
hei shamwari, zvese zvakanyatsotsanangurwa mublog rino, asi zvingave zvinonakidza kuti iwe ubudise chimwe chikamu, kumisikidzwa kwemafaira!… ..
Exclenete post kunyangwe zvingave zvakanaka kana iwe ukaita rako wega dzidziso kuisa iyo nyowani vhezheni
Uuuu, shasha, kuita zvido uye wozozviita, ndanga ndichida kushandisa Arch kwenguva yakareba, kunyangwe ini ndichinyangadza kana zvinhu zvikasashanda, kana ini ndakanamatira pane chimwe chinhu kwenguva yakareba, PANE HAPANA chinhu chiri nani kupfuura kugutsikana kunowanikwa nekugadzirisa dambudziko uye kudzidza kubva pane icho chiitiko haha, saka ipapo ini ndichaisa Arch kusvetukira mumvura uye kutanga kushandisa yakadaro distro (ini zvakare ndine yakaoma iyo yandinofarira minimalism, uye Arch vavaki vanofunga xD imwe chete!)